महन्थलाइ निकाल्न बाबुरामलाइ किन हतार ? आफू बाहेकका नेताको भेडा-बाख्रा संग तुलना – Sanghiya Online
महन्थलाइ निकाल्न बाबुरामलाइ किन हतार ? आफू बाहेकका नेताको भेडा-बाख्रा संग तुलना
Posted on : May 31, 2021 - No Comment
आज भोलि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई पार्टी छाडेर जान पटक पटक डा बाबुराम भट्टराईले भन्ने गरेका छन् । भित्र विवाद बढेका बेला संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हात मिलाएर आ-आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै सहयोग गरेर जानुपर्नेमा छ भने
पूर्वसमाजवादी पार्टी बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा छन्।
अहिले केहि दिन यता पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराइ ले विभिन्न मिडिया हरुमा महन्थ र राजेन्द्र लाइ पटक पटक पार्टी छ्डेर जान भनि रहेका छन्। उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् -“अत: मान्छे तानातान र किनबेचको तमासा नगरौं ! भेडाभेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग हुन दिऊँ ! हात मिलाएर आ-आफ्नो बाटो लागौं ! हिडिरहे फेरि भेट हुनेछ !’ आखिर मा बाबुराम मिलाउन तिर पहल नगरेर किन हिड्न भनिरहेका छन् ।
उपेन्द्र यादब मधेशको आफू एक्कल नेता भएको ठान्छन । उनि पहाडी समुदायका नेताहरुको जति आदर गर्छन मधेशकालाइ गर्दैनन् । मधेश र मधेशी नेता कसैलाई नगन्ने बानिले उनको पार्टी खास गरेर मधेशी नेताहरु निस्किने र फुट्ने गरेको छ । तर पहाड बाट आएका न त अशोक राइको टिम संग बिबाद भयो न त बाबुराम संग । त्यसको कारण हो पहाडी समुदायका नेताहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक । तर पछिल्लो समय पूर्बका राजपा-समाजबादीमा मिलेर जसपा बनेपछि त्यहा मधेशी नेता कार्यकर्ताहरुको बाहुल्य बढि छ । र पहाडी नेताहरु लोपोन्मुख भै रहेका छन् । उनीहरु आफ्नो मान (आदर) कम भैरहेको बुझन थालेपछि पहाडका नेताहरु महन्थहरुलाई छिटो पठाउन खोजि रहेका छन् ।
जनजाति नेताहरु बोल्न नचाहे पनि खस बाट प्रतिनिधित्व गर्ने बाबुरामहरु उनीहरुलाई छिटो निकाल्न चाहन्छन । यती मात्र होइन अधिकाश मुख्य मुख्य भात्री संगठन हरुमा पनि बाबुराम कै कब्जा छ । जसपा निकट प्रेस देखि प्रचार बिभाग सम्म र बिधार्थी देखि गैर भौगोलिक हुदै बौद्धिक माहासंग लगायत मा बाबुराम कै कब्जा छ ।
गगन थापामाथि आक्रमणगर्ने ४०पक्राउ, प्रहरीले भने- जमिनमुनि लुकेपनि समातेर कारबाही गर्छौ
उपेन्द्रले भजाएर खाने मुद्धा नै सम्बोधन भएपछी रिसले गैरकानूनी रुपमा कारवाही- महन्थ
टोल टोलमा पोल पोलमा पुर्ण कदको ओलीको फोटो राख्नु कांग्रेस भन्दा पनि तुच्छा प्रवृति – श्रेष्ठ
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको हातमा बिबादको लड्डु, ओलीको मन्तब्य सुनेर फर्के रित्तो हात
राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाइ तुरुन्त रिहाइ गर्न सरकारलाइ बिश्व हिन्दु महासंगको चेतावनी
उपेन्द्र समूहलाई अर्को शानदार झटका, भोलिको निर्वाचनमा चार सांसदलाई मत हाल्ने अधिकार
जसपा नेता-कार्यकर्तालाइ बाबुरामले भेडा-बाख्रा भनेपछि नेतादेखि पत्रकार सम्मले गरे आलोचना